မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာ တိုင်ပတ်နေတုန်း ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အကူအညီတစ်ခုကြောင့် အဆင်ပြေချောမွေ့သွားရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု - Cele Connections
မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာ တိုင်ပတ်နေတုန်း ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အကူအညီတစ်ခုကြောင့် အဆင်ပြေချောမွေ့သွားရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ကလေးအရွယ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမမြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ လျှောက်လှမ်းရင်း ပရိသတ်အားပေးရကျိုးနပ်စေဖို့ မကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ ပညာတွေကို သင်ယူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေမှာလည်း ပိုင်ဖြိုးသုက မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာ တိုင်ပတ်နေတုန်း ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အကူအညီတစ်ခုကြောင့် အဆင်ပြေချောမွေ့သွားရကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ဒေါ်သုလေးခမျာမှာလေ Oppo နဲ့တွေ့ရင်အထူးတဆန်း‌တွေချည်းပဲ 😬😬😬 Productအသစ်အတွက်ဘာခိုင်းတယ်မှတ်တုံး? သီချင်းဆိုခိုင်းတယ်ဗျာ…. 😅 သီချင်းဆိုတာမှ studioမှာအကျအနကြီးကိုအဆို‌တော်တွေလိုအသံသွင်းရတာ 😏 ဆိုရတာ‌တော့နှစ်ပိုဒ်ထဲပါ။ လူကကြောက်မကြောက်ဆိုတာတော့ လက်ဖျားခြေဖျားတွေကိုအေးနေတာပဲ 🥶 ဆိုနေတာကြောက်သံကြီးပါနေလို့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုလေးက မကြည့်ရက်လို့ ဝင်ကူညီအားပေးသင်ပြပေးရတယ် 😁 သူလေးပါလို့ မဟုတ်ရင်ဒေါ်သုတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေတိုင်ပတ်နေမယ်မသိဘူး…😬ပြောချင်တာကတော့ အသံတွေသွင်းသီချင်းဆိုထားရတယ်လို့။ မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ထားရတာဆိုတော့ ထွက်လာရင်မဆဲကြပါနဲ့လို့ 🥺🥺🥺” ဆိုပြီး ပြောပြလာပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမကိုယ်တိုင် Brand Ambassador အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာအတွက် သီချင်းသွင်းတုန်း ညီမလေးချမ်းမြေ့မောင်ချိုကြောင့် အဆင်ပြေသွားခဲ့ရကြောင်း ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ ကြော်ငြာလေး ထွက်ရှိလာရင် အားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မကြှမျးကငျြတဲ့အလုပျတဈခုမှာ တိုငျပတျနတေုနျး ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့ အကူအညီတဈခုကွောငျ့ အဆငျပွခြေောမှသှေ့ားရကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ ကလေးအရှယျကတညျးက ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမမွတျနိုးတဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာပဲ လြှောကျလှမျးရငျး ပရိသတျအားပေးရကြိုးနပျစဖေို့ မကုနျဆုံးနိုငျတဲ့ ပညာတှကေို သငျယူနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှောလညျး ပိုငျဖွိုးသုက မကြှမျးကငျြတဲ့အလုပျတဈခုမှာ တိုငျပတျနတေုနျး ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့ အကူအညီတဈခုကွောငျ့ အဆငျပွခြေောမှသှေ့ားရကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“ဒျေါသုလေးခမြာမှာလေ Oppo နဲ့တှရေ့ငျအထူးတဆနျး‌တှခေညျြးပဲ 😬😬😬 Productအသဈအတှကျဘာခိုငျးတယျမှတျတုံး? သီခငျြးဆိုခိုငျးတယျဗြာ…. 😅 သီခငျြးဆိုတာမှ studioမှာအကအြနကွီးကိုအဆို‌တျောတှလေိုအသံသှငျးရတာ 😏 ဆိုရတာ‌တော့နှဈပိုဒျထဲပါ။ လူကကွောကျမကွောကျဆိုတာတော့ လကျဖြားခွဖြေားတှကေိုအေးနတောပဲ 🥶 ဆိုနတောကွောကျသံကွီးပါနလေို့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုလေးက မကွညျ့ရကျလို့ ဝငျကူညီအားပေးသငျပွပေးရတယျ 😁 သူလေးပါလို့ မဟုတျရငျဒျေါသုတဈယောကျ ဘယျလိုတှတေိုငျပတျနမေယျမသိဘူး…😬ပွောခငျြတာကတော့ အသံတှသှေငျးသီခငျြးဆိုထားရတယျလို့။ မကြှမျးကငျြတဲ့အလုပျကိုလုပျထားရတာဆိုတော့ ထှကျလာရငျမဆဲကွပါနဲ့လို့ 🥺🥺🥺” ဆိုပွီး ပွောပွလာပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမကိုယျတိုငျ Brand Ambassador အဖွဈ တာဝနျယူဆောငျရှကျထားရတဲ့ ကုနျပစ်စညျးကွျောငွာအတှကျ သီခငျြးသှငျးတုနျး ညီမလေးခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကွောငျ့ အဆငျပွသှေားခဲ့ရကွောငျး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ပိုငျဖွိုးသုရဲ့ ကွျောငွာလေး ထှကျရှိလာရငျ အားပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဘုရားသွားဖူးရင်း သဒ္ဒါပေါ်လာလို့ ဝတ်ထားတဲ့ ရွှေလက်စွက်ကို ချက်ချင်းချွတ်ပြီး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခေးဆက်သွင်
ဂိမ်းဆော့ခွင့်ပါမစ်ပေးထားတဲ့ ရွှေမှုံရတီ မငြိုငြင်ရအောင် ဂိမ်း Stream လုပ်မယ့် ပေ့ခ်ျလေးကို “မယားချစ်” ဆိုတဲ့ နာမည်လေးပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူး